Maaweelintii Madaxda DFS oo soo dhamaatay iyo runta oo cadaatay !! |
Maaweelintii Madaxda DFS oo soo dhamaatay iyo runta oo cadaatay !!
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa in mudo ah shacabka Soomaaliyeed ku heysay maaweelin ah in dalka ay doorasho cod qof ah ay ka dhici doonto sanada 2016-ka marka uu soo dhamaado waqtidga Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Maaweelada Madaxda Dowlada Soomaaliya ayaa markii dambe soo dhamaatay waxa ayna arintu ku biyo shubatay in runta loo sheego bulshada Soomaaliyeed, waxaana Dowlada ay hada cadeesay in doorasho qof iyo cod ah aysan dalka ka dhici Karin sanada 2016-ka.
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo Xukuumada ayaa isku raacday in aan marnaba dalka aysan ka dhicin Karin doorasho qof iyo cod ah , waxaana arintaasi ay dowlada ku macneesay door sababbood ay ku jirto amaanka oon wali hagaagsaneyn, dastuurka oo dhameestirneen iyo arimo kale.
Shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa iyagu layaab ku noqon hadalka kasoo yeeray Dowlada Federaalka Soomaaliya ee ah in doorasho qof iyo cod ah aysan dalka ka dhici karin, waxaana horey loo ogaa in sheekada Dowlada ay tahay shimbirayhow heesa.
Dad badan ayaa hada isweediinaya hadii aysan Doorasho qof iyo cod ah aysan dhaceyn sida ay noqon doonto Xaalada Dalka , waxaana sidoo kale shaki la galinayaa in ay doorasho dhacdo iyadoona taa badalkeeda la hadal hayo in ay dhacdo waqti kororsi ay sameeyaan Baarlamanaka iyo Madaxda Dowlada.
Mr Kay oo u waramayay BBC-da ayaa sheegay in horumar laga gaaray dhinaca dhismaha Maamul goboleedyada, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in sanadkan inta aanu dhamaan la dhameystiro maamulada haray sida Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Si kastaba sheekadii Dowlada ay shacabka ku maaweelin jirtay ee ahaa doorasho qof iyo cod ah ayaan dalka gaarsiineynaa ayaa hada soo dhamaatay warkeeda, waxaana laga fekerayaa qaab kale oo doorasho ah oo Dowlada kale lagu soo dhiso.